ဦးလေးရဲ့မိန်းမ – မြန်မာသတင်းစုံ
Posted on February 22, 2021 Author admin	Comments Off on ဦးလေးရဲ့မိန်းမ
ချို မြင်လိုက်ရသော မြင်းကွင်းကြောင့်ငထက်ကို အရမ်းစိတ်ဆိုးသွားသည်မိမိ ပြန်ပေးသော ဘောင်းဘီ ကို တန်ဖိုးမထားတစ်ကယ်ဆိုလျှင် အဲ့ဘောင်းဘီ ပြပြီး မိမိကိုအကျပ်ကိုင် လိုးလို့ ရသည် မဟုတ်လားအဲ့လိုဖြစ်အောင်ကို ဒီက တမင်ပေးထားတာ ဒင်းက နားမလယ်တာပဲလားနားမလယ်လဲမမခိုင်ကရော ဘာလို့ဒါ မျိုးတွေအိုကွာတွေ့ကြပီ ပေါ့ မနက်ဖြန် လင်ကလဲ ခရီးထွက်မည် အမကလဲ ကျူရှင်ဆိုတော့ချိ မမခိုင် ပြန်အထွက် ဆောင့်ပြီး ရေဆေးကာဘောင်းဘီ ကို ပြန်ယူ ထားလိုက်လေသည်မနက် ၁၀နာရီ ကျော်ငထက် အိပ်ရာကနိုး နိုးချင်း မျက်နှာသစ်ရန် အောက်ထပ်သို့ ဆင်းလာတော့ မမချို ထမင်းစားခန်းတွင်ထိုင်နေသည်တီလေး မောနင်းပါအေးမျက်နှာသစ်ပြီး မမ နဲ့ အပြင်မှာတစ်ခုခု သွားစားရအောင် မြန်မြန် လုပ်နော် နေ့လယ်စာအတွက်ဈေးလဲ ဝယ်ရဦးမယ်မျက်နှာသစ် အဝတ်စားလဲပြီးမမ ခိုင်ရော တီလေးကျူ ရှင် သွားပြတယ်။
တူလေးညနေမှ ပြန်ရောက်မှာမုန့်စားပြီးပုသိမ် ဈေးထဲ လိုတာလေးတွေလိုက်ဝယ်နေသော တီလေး၏ နောက်ပိုင်းအလှကို အနောက်မှ နေကြည့်ကာ ငထက်လီးတောင်နေလေသည်တစ်ခါတစ်လေ ကုန်းပြီးဈေးမေးနေသော တီလေး၏ အယ်ထွက်နေသော တင်ပါး ဝိုင်းဝိုင်းကြီးက နောက်ကနေ စောင့်သွင်း ချင်စရာကင်မရာနှင့်လည်း အပီ အပြင်ကိုဗွိဒိယို ရိုက်ထားပြီး ညရောက်မှအေးဆေလေး မှန်းထု လိုက်ဦးမည်ဈေးထဲမှ အထွက် မချို ခဏလေး ငါအပေါ့သွားမလို့ ဒါလေးကိုင်ထားပြီး ခဏဆောင့်ပေးလိုက်ခဲ့ရမလား တီလေး ဟီး……ဟဲ့တော်တော် နှာဘူးထ အိမ်သာထဲ လိုက်ပြီးနင်က ရေ မရှိရင် ယက်ပေးမလို့လားအယ် ဘာတွေ တွေးနေလဲ မသိဘူးကျွန်တော်က အိမ်သာနားပြောတာပါတီလေးရဲ့အေးပါ အေးပါဒီလိုနှင့် အိမ်ပြန်ရောက်တော့ တီလေးမှာ ဝမ်းဆက်ဂါဝန်ရှည်တစ်ထည် လဲပြီး ချက်ပြုတ်ရန် ပြင်ဆင်တော့သည်မိမိ မှာတီလေးချက်ပြုတ်နေတုန်း။
တီလေး ခန္ဓာကိုယ်အလှကို မျက်စိအရသာခံရန်စိတ်ကူးပျက်သွားသဖြင့် ဖုန်းကိုဖွင့်ကာတီလေးဖင်ကို နောက်မှ ရိုက်ထားသောဗွီဒီယိုဖိုင်ကိုဖွင့်ကြည့်တော့သည်လမ်းလျောက်သွားသော တီလေး၏ဖင်နှစ်လုံးမှာသေးသွယ်သောခါးအောက်မှ ဘယ်ညာတစ်လုံးခြင်းပစ်ကာ လှုပ်ခါသွားရာ မြင်ရသော ပုရိသတိုင်း မျက်လုံးကျွတ်မတက် ကြည့်ကာမှန်းထုရမည် မလွဲကြည့်ရင်းလီးကတောင်လာသည်ဆိုင်ကယ် ယူမည့်ဆိုင်နား အရောက်တီလေး ထမိန်ဖြန့်ဝတ်လိုက်ပုံကစွင့်ကား မို့မောက်နေသော ဖင်ကြီးအားအစွမ်းကုန် လစ်ဟပြနေသည် မယ်ရွေးပွဲက မယ်လိုကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်မျိုး ဘယ်သူ့မေးမေး အပျိုသာပြောကြမည်သာကြည့်ရင်း လီးကတောင်သထက်တောင်လာသည်ငထက်ရေ ငထက် တီလေးကို ပဲဆီတစ်ပုလင်းလောက် ထိပ်ကဆိုင်မှာ ဝယ်ပေးပါလားဒီမှာပိုက်ဆံလာယူငထက် ဖုန်းပိတ်ပြီး ပိုက်ဆံထယူလိုက်သည်မချို မျက်လုံးပြူးသွားသည်။
ဟန်မပျက်နေကာပိုက်ဆံ ပေးလိုက်သည်ငထက်ထွက်သွားပြီးမသာလေး လီးကြီးကတောင်နေတယ်ဘာတွေများ ကြည့်နေပါလိမ့်ငထက်ဖုန်းကိုယူပြီးဖွင့်ကြည့်လိုက်သည်လော့မခတ်ထား ဖွင့်လိုက်ရာအို ဒါဒါ ငါငါ့ကို နောက်ကနေရိုက်ထားတာပါလားအဟင်း ဟင်း တွေ့မယ်ငထက် ယောင်ပြီး ထလာရာ အိမ်ရှေ့ အဝရောက်မှ ဟိုက် လီးကြီးကတောင်နေရာခေါင်းချိုးချလိုက်သည်အိမ်ပေါ် အရောက် တီလေး ဒီမှာရပြီ အေး ခဏလာခဲ့ဦး ဒီနားကိုငထက် တီလေးနားအရောက်ဒါဘာလုပ်တာလဲ ငထက်ဟိုက် မိမိ ရိုက်ထားသော တီလေး၏ ဖင်ပုံဗွိဒိယိုဗျာ ဟိုဟို ကျွန်တော် စိတ်မထိန်းနိုင်လို့ပါနင်ကကိုယ့်ဦးလေး မိန်းမကို မှန်းနေတာငါ့အတွင်းခံကိုလဲ နင်တို့အိမ်မှာ နင်မဖွယ်မရာလုပ်တာ မနက် ငါ့မှာ မသိပဲဝတ်မိတာ တစ်လမ်းလုံး ဒုက္ခတွေ ရောက်လို့ဘာလဲ နင်ငါ့ကို လိုးချင်နေတယ်ပေါ့ နင့်ဦးလေးသာ ဒါတွေ သိသွားရင်ဟာ တီလေးရယ် ဦးလေးကိုမတိုင်ပါနဲ့။
ကျွန်တော် စိတ်မထိန်းနိုင်လို့ ဖြစ်သွားတာပါနောင် မဖြစ်စေရပါဘူးကျွန်တော် မနက်ဖြန် မနက်ပဲ ပြန်ပါ့မယ်ဗျာတီလေးကို လေ ကတော့ပြီး တောင်းပန်ဟား နေစမ်းပါဦး မင်းအဲ့လိုပြန်လို့ ရမယ်တဲ့လားမင်း ငါ့အတွင်းခံ ဘောင်းဘီတွေကို ဘာလုပ်ထားလဲ မင်းသိမှာပါနင်ငါ့ကို နင့်ဦးလေး မသိစေချင်ရင်တော့ငါအခုရာသီလာနေတယ်ဗျာ အဲ့တာ ဘာလုပ်ပေးရဘာပဲလုပ်လုပ်ပေါ့အေး နင်မလုပ်ပေးဘူးဆိုရင်ပြန် ရတယ်ငါနင့်ဦးလေးနဲ့ နင့်အမေဆီ ကိုနင် ငါလမ်းသွားတုန်းနောက်ကနေရိုက်ထားတဲ့ပုံရယ် နင် လုပ်ခဲ့တာတွေ ပြန်ပြောရုံပဲ ပြန်ပါဟာလုပ်ပေးပါ့မယ် တီလေး တိုင်တော့မတိုင်ပါနဲ့အဲ့တာဆို ငါ ဒီနားမှာထိုင်မယ်ရေခဲ သေတ္တာထဲ က နို့ဆီဘူး သွားယူပါမုန့် ချပ် နှစ်ချပ်ပါယူခဲ့ရပီ တီလေး ဒီမှာ ပါနေဦးဟ ဖရဲသီး အဲ့ထဲမှာရှိတယ်ပြီးတော့ အအေးဘူး ပါယူခဲ့ဟုတ် ကဲ့ဖန်ခွက်တစ်လုံးပါယူခဲ့နင် ငါ့အဖုတ်ကိုကြည့်ချင်နေတာမဟုတ်လားမလိမ်နဲ့ ပြော။
ဟုတ်ကဲ့အေး နင့်ဖုန်း ယူလိုက်ပါဦးဗျာမဗျာနဲ့ ကင်မရာဖွင့်လိုက်ပြီးရင် ငါ့နောက်လိုက်ခဲ့ငါရိုက်ဆိုတော့မှ ရိုက် ဗွိဒိယို နော်ဟုတ်မချိုရေချိုးခန်းထဲ ဝင်ပြီး တခါးကို တစ်ဝကိခန့်ဖွငိ့ပြီး ငါထမယ် နင်ငါထွက်လာရင် ပိတ်လိုက်ဟုတ်ပီလားဟုတ် တီလေးသေချာရိုက်တီလေး အိမ်သာထဲဝင်ကာ ဝတ်ထားသောဝမ်းဆက် ဂါဝန်ကို မလိုက်သည်အားပါး ဖြူ ဝင်း တောင့်တင်းနေသော ပေါင်တံဖွေးဖွေးနှင့်အတူ ပြည့်တင်းနေသောဖင်ကြီးက အတွင်းခံ မိုးပြာရောင်အောက်မှ အတွင်းခံကို ဖောက်ထွက်မတက် ပြည်တြင်းနေသည်ရုတ်တရက် အတွင်းခံကို ဆွဲဟပြီးနဲနဲ လျောလျလိုက်သည်သေချာ မမြင်ရ ဘေးတိုက်ကြီးတီလေးဘောင်းဘီထဲ မှ တစ်ခုခု ဆွဲထုတ်ဟာဂွမ်းကြီး ရာသီလာရင်သုံးသော ပစ္စည်းထုတ်ပြီး ဘောင်းဘီပါခွတ်ပြီး လျှော်မည့် ခြင်းထဲပစ်ထည့်လိုက်လေသည်ပြီးနောက် ဂါဝန်ချ ကာ ထလာတော့မှာထားသည့် အတိုင်း ကင်မရာကို ပိတ်ကာ။
ရပြီလား ရရင် ငါချွတ်ထားတာသွားယူဖန်ခွက်ထဲ ဂွမ်းမှာပေနေတဲ့ သွေးနေရာကို ခံလိုက် အအေးလောင်းထည့် အဲ့အပေါ်ကနေဗျာမဗျာနဲ့ထည့် ပြီးရင် ပါမုန့်ပေးပေးဆို တီလေး ဂါဝန်မကာပါမုန်ကို ဂါဝန်အောက် ထည့်ပြီးလာ အဲ့ဖန်ခွက်က အရည်တွေ ကို နင်သောက်ဟုတ်မိမိမှာ တီလေး ရာသီလာတာကိုတောင်မရွံမရှာ ယက်ပေးချင်သူမို့ ယခုလိုသောက်ရတော့ တစ်ခါထဲ မျိုချလိုက်သည်ရပြီ ရော့ဆိုကာ ဂါဝန် မကာ ပါမုန့်ကိုထုတ်လိုက်ရာ ယိုသုတ်ထားသည့်နှယ် ရွှဲဆိုနေသော ရာသီသွေးတွေက ပါမုန့်မှာငထက်ဗျာနို့ဆီကို ငါ့ အဖုတ်ပေါ် လောင်းချ ပြီးရင်ပါမုန့်နောက်တစ်ချပ်နဲ့ သုတ်ဟုတ် တီလေးမှာပေါင်ကားပေးလိုက်ရာ ဖောင်းကားနေသောအဖုတ်ကြီး မှာအနည်းငယ် ဟလာပြီးစောက်စေ့လေးက ပြူးထွက်လာသည်ချိုရေရှင်ဟာ မမခိုင် နင်စားပွဲခုံအောက်မြန်မြန်ဝင်လိုက်မမ ခိုင်စော လှချည်လားခေါင်းလေးနဲနဲ မူးလို့ ပြန်လာတာသွားနားလိုက်လေ။
မမ အခန်းထဲဒီမှာပဲ ခဏ နားတော့မယ် ပြီးမှတစ်ခါထဲရေချိုးမယ် ငထက်ရော မမြင် ပါလားသူအပြင်သွားတယ် မမရဲ့ငထက် တစ်ဖက်ပိတ် စားပွဲ အောက်မှ ထိုင်ကာပေါင်ကာထားသော မမချို၏ ပေါင်နှစ်ခုကြားတွင်လင်ထဲတွင်လည်း ပါမုန့်တစ်ချက် ခုချိန် နှစ်ယောက်လုံးထမရ မထူးတော့ပီ ရသည့် အခွင့်ရေးလက်လွတ်မခံတော့ပဲတီလေး၏ ဖြူဝင်းဖောင်းကားနေသော အဖုတ်ကြီး အမွေးတောင်မရှိ ရိပ်ထားသည်တူသည်ပါမုန့်နှင့် အဖုတ်ကိုဖြဲကာ သုတ်လိုက်သည်ရာသီလာထားတာတွေ ပြောင်သလောက်ရှိရာပါးစပ်နှင့် တေ့ပြီး နူးညံအိစက်နေသော စဖုတ်ကြီးတစ်ခုလုံးဆွဲစုပ်လိုက်သည်အင့်ဘာဖြစ်လို့လဲ ညီမလေးဟိုဟို ဘာမှ မဖြစ်ပါဘူးမချို ငထက်ခေါင်းကို လှမ်းခေါက်လိုက်သည်မသာလေးငြိမ်ငြိမ်နေမရ ငထက်လျှာကိုချွန်ကာ အဖုတ်အက်ကွဲကြောင်းအောက်မှနေ အထက်သို့ပင့်ကာကော့ယက်လိုက်ပြီး အစေ့ ရဲရဲလေးကို ခပ်ဖွဖွ စုပ်ချလိုက်သည်။
အား …….ရှီး………ဟဲ့ဘာဖြစ်တာလဲဟိုကြွက်ကြွက် ပြေးသွားလို့ လှမ်းမောင်းလိုက်တာသြော် ဒါနဲ့…..မခိုင် ကတီလေး နှင့် စကားတွေပြောနေသည်မိမိကလည်း တီလေးပေါင်ကိုဆွဲကားကာစောက်ဖုတ်နှစ်ခမ်းသား နှစ်ချက်ကိုဖြဲပြီး လျှာကိုအပြားလိုက် အထက်အောက် ဆွဲဆွဲလျက်ပြီးစောက်စေ့ ကို စုပ်စုပ်ပေးလိုက်သည်အင်း ဟင်း……မခိုင်ပြောသည်ကို ပြန်ပြောသလိုနှင့်ယောကာ ညည်းနေသည်မချိုနားထဲ မမခိုင်ပြောတာတွ မကြားတော့မိမိ စောက်စေ့ကို ပြုတ်လုမထွက်စုပ်နေသောငထက်ကြောင့် ဖီးတွေတက်ကာနေသည်တစ်သက်နှင့်တစ်ကိုယ် လုံးဝမခံစားဖူးသော အရသာကြီး မိမိ ယောက်ျားဖြစ်သူမှာ ဤသို့လုပ်ပေးဖို့ မဆိုထားနှင့် ကိုင်ပ်ကိုင်မကြည့်ယခုလို ရာသီလာသည်ကိုယက်ပေးဖို့ဆို ဝေလာဝေး မိမိတို့ မိန်းကလေးတွေမှာ ရာသီလာသောအချိန် ဟော်မုန်း ဓာတ်အများဆုံးမို့ ထိုအချိန်မျိုး ကာမစိတ်တွေက လွယ်လွယ်ကူကူနှင့် အမြင့်ဆုံးသို့ ရောက်တက်ကြသည်။
ငထက်မှာ လည်း လျှာကိုအဖုတ်တွင်းထိုးထည့်နေရာပါးစပ်တစ်ခုလုံး ရာသီသွေးနှင့် အရည်များပေကျံနေတော့သည်လျာကို အောက်စအို ဝသို့ပြောင်းပြီး လက်ခယ်က စဖုတ်တွင်း လျှာကစအိုဝသို့ တစ်ပြိုက်နက် ထိုးလျှက်လိုက်ရာအင့် …. အား…..ဟား……အိုး ..သြော်…နင်တို့က ဒီလိုကိုးဟာ အိုသွားပြီ ဘယ်အချိန်ထဲ ကအနားရောက်နေမှန်းမသိသော မမ ခိုင်ဟဲ့ငထက်ထစမ်း မိချို နင်လဲထ လာနှစ်ယောက်လုံးကြည့်စမ်းပါဦး ဖြစ်နေကြတာ ဟိုအကောင်ကလည်း ရာသီလာတောင်တာ မရွံမရှာယက်နေလိုက်တာမိချို နင်ထ အဲ့နေရာ မှာ ငထက်ထိုင်နင်က အဲ့စားပွဲပေါ် တက်ပြောပြီး မမခိုင်တစ်ခါးသွားပိတ်သည်ပိတ်ပြီး ပြန်အလာ တီလေး၏ ဂါဝန်ကြီးကို မကာလက်ထဲတွင် ဘယ်အချိန်ထဲကရောက်နေမှန်းမသိသော ဖီးကြမ်းငှက်ပြောသီး အခွံနွှာတစ်လုံးနင့်ပေါင်ကားထား မိချိုပြောပြောဆိုဆို ပေါင်ကိုဖြဲကာ လက်ထဲက ငှက်ပြောသီးကို ထိုးထည့်လိုက်သည့်။
အင့်.. မမ ခိုင်ဘာလုပ်တာလဲလျှာမရှည်နဲ့. ဟိုငနာလေး အဲ့တာကို နင့်ပါ့စပ်နဲ့စုပ်ပြီးကုန်အောင်စား မကုန်မခြင်း ပြောင်နေအောင်ယက်ငထက် မမခိုင်ပြောသည့်အတိုင်း တီလေး၏စဖုတ်ထဲ ဝင်နေသော ငှက်ပြောသီးကို စုပ်လိုက်သည် ပြီးနောက်မျိုချပြီး ကျန်နေသေးသော ငှက်ပြောသီးကို အားရပါးရ ယက်ကာမချိုတစ်ယောက် ငှက်ပြောသီး၏နူးညံသောအတွေ့နှင့် အတူ စဖုတ်ကြီးတစ်ခုလုံးနေရာလပ်မကျန်ယက်ပေးပြီး အဖုတ်တစ်ခုလုံးကျွတ်ထွက်မတက် စုပ်ယူနေသော ငထက်ကြောင့်အားးးး ကောင်းလိုက်တာ မောင်ရယ်အမလေး မောင်တောင်ဖြစ်နေတာမမခိုင် မိမိပုဆိုးအားလှန် လီးကြီးကိုကိုင်ကာ အားရပါးရစုပ်တော့သည်လီးမှာကြီးလုံးပတ်ကြီးလှ သဖြင့်ပါးစပ်နှင့်တောင်မဆံ့ မပြဲ ကြီးဟာ အို မမခိုင် ဘာလုပ်နင်တို့ကြီးပဲ မရဘူး ငါလဲသူ့လီးမြင်ထဲက ခံခြင်နေတာ တူလေးတီလေးကို ယက်ပေးပြီးရင်တီကြီးကိုယက်ပေး နော်အစုပ်အယက် လျာကစားအားကောင်းသောငထက်ကြောင့်။
တီလေး ကော့ပြန်လန်လာကာ အား…..အား…..အားး စုပ်….စုပ်…. စုပ်…. နာနာစုပ်….တီလေး အဖုတ်ကြီး ပြုတ်ထွက်ခြင် ထွက်ပစေအား…..အား…..ရှီး……အား…ဟား……..တီလေး အသားတွေတစက်စက်တုန်ပြီးလက်နှစ်ဖက်က မိမိခေါင်းကို အဖုတ်နှင့် ဆွဲဖိကာသုံးလေး ခါမျှ ကော့ကော့ တက်ကာစောက်ရည်တွေကို ပန်းထုတ်လိုက်သည်အားကောင်းလိုက်တာ မောင်ရယ်ဟယ်မျိုချပစ်လိုက်တယ်အင်း မမကို ချစ်လို့အိုမအိုနဲ့ မမ သားဟာစုပ်ပေးမမခိုင်နေရာပြောင်း ထမိန်ချွတ်လိုက်မမခိုင် ထမိန် ချွတ်လိုက်ရာ စောက်မွေးကြားမှဖောင်းကားနေသော အဖုတ်ကြီးမှာ အရည်တို့နှင့်ရွှဲဆိုနေသည် အသာလေး အမွှေးတို့ကို ဆွဲပြီးလျှာပြားကြီးနှင့် ကုန်းယက်တော့သည်လီးကနဲတာကြီးကို မဟုတ်ဘူး ဒစ်ကြီးကလဲအားရစရာကြီးနော်ပြောပြောဆိုဆို လျှာနှင့်ဒစ်ထိပ်ကြီးကို ယက်ပြီး စုပ်ပေးနေသည်မမခိုင်အပျိုကြီးတစ်ယောက်မှာတော့ အဖုတ်မွှေးတွေကြားမှ မိမိစောက်စေ့ကိုစုပ်ပေးနေသော ငထက်ကြောင့်။
စောက်ရည်ကြည်များ ဒလဟော ဆင်းလာလေသည် တစ်ခါမှ မခံစားဖူးသော အပျိုကြီးတစ်ယောက်ကော့ပြန်လန်ပြီး ဖင်ဆုံကြီးကို ကြွကြွပေးကာ ၂ကြိမ်ခန့် ပင် ပြီးသွား၏ငထက် မမ ခိုင်၏ စဖုတ်ကို လက်နှင့် ပွတ်သပ်ပြီးစောက်စိ လေးကို အသာကစား စအိုဝကို လျှာနင့် ထိုးလျက်လိုက်သည်ကျန်လက်တစ်ဖက်က တီလေး၏ ရွှေရင် နှစ်မွှာကို ဘယိညာနယ်ပေးနေသည် ညီမနှစ်ယောက် ၏ ညည်းညူနေသံတွေက အခန်းထဲ ညံနေတော့သည်မိမိလည်း တီလေး၏ ပလွေကြောင့် မထိန်းနိုင်တော့ပဲ တီလေး သားပြီးတော့မယ်ရတယ် ရတယ် မမ ပါးစပ်ထဲ မှာပြီးလိုက်အအားဗြွတ် ဗြွတ် ဗြွတ်တီလေး ပါးစပ်ထဲ လရည်များပြည့်လျှံကုန်သည်တီလေးထပြီး မမ ခိုင်ကိုကြည့်ကာ မမ ခိုင်နှင့်နုတ်ခမ်းခြင်းစုပ်ကာ လရည်တွေကို မမခိုင် ပါးစပ်ထဲ ပို့ပေးပြီး နှစ်ယောက်သား မျိုချလိုက်သည်ပြီးနောက် လီးကို ကိုင်ကာ ဂွင်းထုရာ လီးကြီးကချက်ခြင်းတောင်လာတော့သည်။
ငထက် မင်းတီကြီးကို အရင်လိုးပေးလိုက်မမ အဲ့တိုင်းပေါင်ကားထားနော်ညီမနှစ်ယောက် အဝတ်စားတွေ အကုန်ချွတ်ချပြီး ငထက်လဲ ချွတ်ကာ မမချို ပေါင်နှစ်ချောင်းကြားဝင်ကာလီးကြီးနှင့် အက်ကွဲကြောင်းအထက်အောက်ဆွဲပေးပြီး မမချို လိုးမယ်နော်နာရင်မကြောက်နဲ့နော် ခဏပဲပြီးရင်ကောင်းလာမှာငါတစ်ခါမှ မခံဖူးဘူးနော် ပြီးတော့ နင့်လီးကဧရာမကြီး ရှည်လဲ ရှည်တယ် ဖြေးဖြေးထည့်နော် ငါကြောက်တယ်အင်းပါ လီးကိုအဖုတ်ထဲ ထိုးထည့်သည် လုံးဝမဝင် အရည်တွေကရွှဲနေပြီ အားနှင့်ဖိထည့် လိုက်သည် မရတီလေး လိုးရှင်းလေး ထည့်ပေးပါလားသြော်အေး တီလေး ရေချိုးခန်းထဲမှ လိုးရှင်းယူကာ လီးကြီးနှင့် အဖုတ်ကို သုတ်ပြီးအနားနား ကပ်ကာအားနဲ့သာ စောင့်လိုးချလိုက် မမ သူ့နို့တွေနယ်ပေးထားမယ် အော်လဲထည့်သာထည့် မမ ပါးစပ်ခြင်း စုပ်နေလိုက်မယ်ဟုတ် ငထက်လီးကို အဖုတ် ဝတေ့ပြီး အားနှင့် ဖိလိုးလိုက်သည်ဗြစ် ဗြစ် ဗြစ်အားအား အား……အမေ့ကွဲပြီအားနာတယ် ပြန်ထုတ်။
အဟင့်ဟင့်အပျိုကြီးခမျှာ နားလွန်းလှသဖြင့် မိမိရင်ဘက်ကိုတွန်းထားလေသည် တီလေးလက်တွေက နို့ကိုနယ်ပေးပြီး နုတ်ခမ်းခြင်း လှမ်းစုပ်ပေးနေသည် မိမိလဲ တီလေး နယ်ပေးနေသောရွှေရင်အစုံနှင့် နို့သီးခေါင်းလေးတွေကို စုပ်စုပ်ပေးနေရာ မမခိုင်ငြိမ်ကြသွားတော့ လီးကိုဖြေးဖြေးခြင်း ချော့သွင်းလိုက်သည် တစ်ဝက်ခန့် အရောက် ရှေ့တွင်တစ်ခုခုလာခံနေရာဟားအပျိုမှေးပဲအားထည့်ကာ အဆုံးဖိထိုးထည့်လိုက်သည့်ဗြစ်ဗြစ်…ဖောက်ဗြစ်ဗြစ်….ဗြစ်ဒုတ်ကြပ်တည်းလွန်းသဖြင့် အဖုတ်ကွဲသံ အမှေးပါးပေါက်သံ သားအိမ် ထောကသံတို့ ထွက်လာသလို မမခိုင် ဆီမှလဲအား……… ကွဲပြီအမေရေ သေပါပြီနာတယ် နာတယ်တီလေး မမခိုင်နို့တွေကို လျှာဖျားနှင့် ကလိပေးနေပြီး မိမိမှာလီးကိုဖြေးဖြေးခြင်း အထုတ်အသွင်းလုပ်ပေးလိုကသည်မမခိုင် ခံနိုင်ရည် ရှိလာတော့ ငထက် လီးကို နဲနဲ့မြန်မြန်စောင့်စောင့် လိုးပေးနေသည်လီးကြီးမှာ အဖုတ်ထဲ ဝင်သွားသည်နှင့်။
အဖုတ်နုတ်ခမ်းသားများ အထဲဝင်ကာလီးပြန်ထုတ်တိုင်းအဖုတ်နုတ်ခမ်းသားတွေဆူကာလိပ်ထွက်လာသည် လီးတစ်ချောင်းလုံးသွေးတေပေနေသောလဲ အတွင်းပိုင်းထဲ လီးကြီးက အဖုတ်ကာမကြောများကို စွစွ ပေးနေ သည်ဂေါ်လီတွေက စောက်စေ့အား ဝင်တိုင်းထွက်တိုင်း ထိထိမိမိကြီးကို ပွတ်တိုက်နေရာနာလဲ နာ ကောင်းလဲ ကောင်းလာပြီးအား…….အီး……ဗြွတ် ဗြွတ်အားအား…….ကောင်းလား မမခိုင်အင်း ဘယ်လိုကြီးဖြစ်လာမှန်း မသိဘူးနဲနဲပိုသွက်ပေးအား ……အဟင်းးဗြွတ်ဗြွတ် ….အားအားအားအား……စောင့်စောင့် အားရပါးရသာစောင့် ချမမ အဖုတ်ကြီးကွဲထွက်ချင်ထွက်ပစေ စောင့်စောင့်အဲ့တာခံလို့ ကောင်းလာပြီရှီးးး……ဗြွတ် ဗြွတ် ဗြွတ်ဖောင်းဖောင်း ဖောင်းအား အား အား..ရှီး…..အီး………အီး…….အသံတွေ ဆူညံစွာထွက်လာသည်ကိုယ့်ခြံ ကိုယ့်ဝင်းနှင့်ဆိုတော့ ဘာမှ ဂရုစိုက်ဆရာ မလို ပေမချို မှာ မမခိုင်၏ နို့ကို နယ်နေရာမှကြီးမား တောင့်တင်းကာ။
သန်မာလှသော လီးတံရှည်ရှည်ကြီးက. အဖုတ်ဖောင်းဖောင်းကြီးထဲအဆက်မပျက် အရှိန်နှင့် တိုးဝင်နေတာ ကြည့်ရင်း စောက်ဖုတ် တစ်ခုလုံး အရည်တွေ ရွှဲ ဆိုလာတော့သည်မိမိ အဖုတ်ကို လက်နှင့် ကစားကာ မိမိအလှည့်ကို စောင့်ကြိုနေလေမိသည်အချက် ၅၀ခန့် ဆက်တိုက် စောင့်လိုးပေးနေရာမမခိုင် တစ်ယောက် ဖင်ကြီးကို ကြွကြွ လာကာမိမိခါးကို အတင်းဖတ်ထားပြီးအား…….ရှီး…… သေးပေါက် ချင်သလိုကြီးဖြစ်လာပြီ အား…… သေတော့ မယ် ဘယ်လို ကြီးဖြစ်လာ မှန်း မသိဘူး အား…….ရှီး…….. အား……..အား…..ငထက် ပိုပြီး မြန်မြန် နှင့် အားပါပါ စောင့်လိုးပေးလိုက်ရာအား………အား……….အမေရေ……အား…..အား…………… ခနဲ ကော့ ကော့ပြီး ငြိမ်ကြသွားတော့သည်ခဏနော်တီလေးအင်းဘာလုပ်မလို့လဲခဏပါ သား မပြီးသေးလို့တီလေးထဲမှာပြီးလေ ကွာဟင့်အင်း တီလေးကို စိမ်ပြီး အကြာကြီး လိုးချင်တာအယ် အဲ့တာ ဆိုအခုက မမခိုင်ထဲ ပြီးလို့မရဘူးနော်။
တော်ကြာ ဗိုက်ကြီးမှဖြင့်အရှေ့ထဲ မပြီးပါဘူး တီလေးရဲ့အရှေ့လိုးပြီး မှ နောက်ထဲ ပြီးမှာဟယ် ရပါ့မလား နင့်လီးဒီလောက်ကြီးတာတစ်ခုခု ဖြစ်သွားမှဘာမှ မဖြစ်ပါဘူး တီလေးရဲ့မခိုင်တစ်ယောက် နတ်ပြည်ရောက်သွားသည့်နှယ် မှိန်းနေရာမှ မိမိ ပေါင်နှစ်ချောင်းကိုဖြဲကာ နို့တွေကို ခပ်ကြမ်းကြမ်းပွတိသပ်ပြီး နို့သီးခေါင်းတွေကို အားပါးတရစုပ်နေသဖြင့်ဟင် ဆက်လုပ်ဦးမှာလား မင်းတီလေးကို လဲ လုပ်ပေးဦးလေတီကြီးကို လိုးရတာ အားမရသေးလို့ကိုယ်တော်ရယ် တီလေးပြိုင်းနေပြီ လိုးချင်သပဆိုလဲ လိုးတော်မူပါငထက်တစ်ယောက်ပြန်စွ ပေးလိုက်ရာ မခိုင်တစ်ယောက် ပြန် ကောင်းလာသည်စောစောကလောက် မနာတော့ အောက်မှ ဖင်ကိုကော့ကော့ ပေးမိနေသည်မမ ကုန်းပေးပါလားဟင် အင်းပြီးရောမမခိုင် လေးဘက်ထောက်လိုက်ရာဖြူဝင်းနေသော တင်ပါးကြီးက ကားထွက်နေပြီးစဖုတ် ကြီးက ဖောင်းကာ နောက်သို့ ပြူးထွက်နေသည် လှလိုက်သည့် အဖုတ်။
မိနိးမချင်းပင် မနာလိုဖြစ်စရာငထက်မှာ မမခိုင်၏ တင်ပါးကြီးကို လျှာနှင့် ဘယ်ညာယက်ပြီး စအို ဝကိုပါ လျှာနှင့် ကလိပြီး စုပ်ချလိုက်သည်အင့် ဘယ်လိုတွေ လုပ်နေတာလဲ မမ မနေတက်တော့ဘူး လိုးပါတော့ကွာမလိုးသေး စဖုတ်ကြီးကို လျှာနှင့် ပင့်ကာ ယက်ချလိုက်သည်အား…….ဟား ….မနှိပ်ဆက်နဲ့တော့ လိုးပါတော့အားဟား….. သေတော့မယ် လီးကြီးကို အဖုတ်ထဲ မြန်မြန် ထည့်ပါတော့ငထက်လီးကြီးကို အဖုတ်ထဲထိုးသွင်းလိုက်သည်ဗြွတ် ဗြွတ်….အင့် အင့်အား……… ကောင်းလိုက်တာမောင်လေးရယ်လီးကြီးက ဗိုက်ထဲ ထိတောင် ရောက်သွားသလားပဲအား…..ဗြွတ် ဘွတ် အိုး အိုး ဗြွတ်စောစောကထက် ခံလို့ကောင်းလိုက်တာစောငိ့သာစောင့်ဗြွတ် ဗြွတ် ဘွတ် ဘွတ်ဖောင်းဖောင်း ဖောင်းအချက် ၃၀ခန့် ခပ်မှန်မှန် စောင့် ပေးလိုက်ရာမမ ခိုင် တစ်ယောက် ဖင်ကြီးကို ကော့ကော့ ပေးနေသည်ငထက် ရုတ် တရက် လီးကြိးကို ဆွဲချွတ်လိုက်ရာဟာ အားဒီမှာ ကောင်းနေပြီ ပြန့်ထည့်လေ။
အင့် အာ အဲ့တာ မရလောက် အင့် အားအားအား ကျပ်တယ် အားအား အားမရဘူးဗြစ် ဗြစ် ဗြစ်အား ………ငထက်စအို ဝကို တေ့ ပြီး လီးကြီးကို တစ်ဆုံးနီးပါး အားကုန် ထိုးထည့်လိုက်သည်စအိုကို အစိမ်းလိုးခွဲလိုက်ရာမမခိုင်တစ်ယောက် ငယ်သံ ပါအောင်အော်ပြီးဒူးရော လက်ပါ မထောက်နိုင်တော့ဘဲ ကြမ်းပြင်ပေါ် လှဲချရာ လက်နှစ်ဖက်နင့် အမြန် ထိန်းပြီးမက်တပ် ထ မမခိုင်ကို မကာ စအိုကို စိတ်ရှိ လက်ရှိကို မီးကုန် ယမ်းကုန် စောင့်ချတော့သည်မမ ခိုင်တစ်ယောက် ပျော့ ခွေကာ အသံပင် မထွက်နိုင်တော့ ငထက်လီးတစ်ခုလုံးသွေးတွေ ရဲရဲ နီ နေတော့ သည်ငထက် ဖင်ကို လိုးရသည် ကိုပိုကြိုက်လေသည်စအို ဝက ကျုံနေသဖြင့် လီးကြီးမှာ အရသာလဲ ပိုတွေ့နေရာ အချက် ၅၀ခန့် စောင့်ချပြီးတွန့်ကနဲ တွန့်ကနဲ နှင့် လရည်တွေကို စအိုထဲသို့ ပန်းချ လိုက်လေတော့သည်မသာလေး သူများကို မတရားလိုးသတ်တယ်ထတောင် ထလို့ ရပါ့မလား မသိဘူးနင့် လရည်တွေလား ဖင်ထဲနွေးနေတာပဲ။
မမ ဖင်ကြီးကလှတာကိုးမောင် တီလေးကိုရော လိုးပေး ဦးလေခဏရေဆေး ဦးမယ်အင်း မြန်မြန်လုပ်ရေဆေးပြီးတီလေး သားပေါ်တက်တီလေး အဖုတ်ကို မှုတ်ပေးမယ် တီလေးလဲ လီးပြန်စုပ်ပေးအင်း ဒီလို မျိုးလားခြောက်ကိုး ပုံစံအပြန်လှန် စုပ်ပေးပြီးတီလေး လှဲလိုက်တော့ လိုးချင်လာပြီ တီလေးအဖုတ်ကြီးရာသီလာတာတောင် မှုတ်လို့ကောင်းတာ လိုးရရင်တော့လိုးရင် မညှာနဲ့ နင့်ဟာတစ်အားကြီးတာကွဲချင်ကွဲပစေ ရတယ်ပြီးရင် ငါ့ကိုဖင်ပါ လိုးပေရမယ်ကြာပါတယ် ငါအပေါ်ကတက်ဆောင့်မယ်နင်လဲကြမ်းကြမ်းရမ်းရမ်းသာလိုးပြောလဲပြော လီးကိုကိုင်ကာ အဖုတ် ဝတေ့ပြီးစောင့်ချလိုက်ရာအား…..ဗြစ် ဗြစ် ဗြစ် ထုတ်.. ထုတ် ထုတ် ဒုတ်လီးကြီးမှာ တဆုံးဝင်ပြီး ဂေါ်လီတွေက တစ်ထစ်ခြင်း အမြန် အစေ့ကို ပွတ်တိုက်ပြီး သားအိမ်ကိုသွားစောင့်လေသည်ကောင်းလိုက်တာ သားအိမ်ပင် အောင့်သွားသည်လီးကြီးမှာ ကြီးလဲ ကြီး ရှည်လဲ ရှည်သည့်အပြင်ဂေါ်လီကလဲ ပါရာ။
တီလေး ခမျှာလယ်တိုင်လေးမော့ပြီး အားတစ်ခွန်းထဲ အော်ကာ ခပ်ကြမ်းကြမ်းသာစောင့် စောင့်ချနေရာ ငထက်လီးကြီး ကြိမ်းလာသည် လီးကို ကြည့်လိုက်ရာ သွေးတွေတီလေးရာသီ လာသည်လား အဖုတ် ကွဲလို့ ထက်ွသည့်သွေးလားမသိအဲ့လောက်ဖြစ်လှတီလေးကိုပွေ့ ကာ ပေါင်နှစ်ချောင်း ပခုံးပေါ်ထမ်းကာ အားရပါးရလိုးတော့သည်ဗြွတ်ကနဲ ဗြွတ်က နဲ့ လီးဝင်သွားတိုင်းစောက်စေ့ကို ဂေါ်လီက ထိထိမိမိကြီးတိုက်နေရာနဂိုထဲက ဖီးတက်နေသော မိမိ ဘယ်နှစ်ချီပြီးလို့ ပြိးမှန်းမသိတော့ပေငထက်လီးကလဲ အဖုတ်ထဲ ပြည့်ကြပ်နေရာအဖုတ်အတွင်းသားတွေကို နေရာလပ်မကျန်ဒစ်ထိပ်ကြီးက. ဆွဲမွှေ့နေလေသည်မိမိလိုချင်သော ကာမအရသာထူးကြီးကြောင့်မချိုတစ်ယောက် ငထက်ကို အစွဲကြီးစွဲနေမိလေသည်တီလေး ဟိုဘက်လှည့်ပေးဖင်လိုးတော့မှာလားအင်းခဏလေး ငါကုန်းပြီးဖြဲပေးမယ် နာလို့အော်လဲလိုးသာလိုး အားမနာနဲ့ခရမ်းနုရောင်သမ်းနေသော စအို ဝက်ို ယက်ပြီးစတွေး ထွေးကာ ဒစ်ထိပ်ကြီးကို အားနှင့် ဖိကာလိုးချလိုက်လေတော့သည် ….ပြီးပါပြီ။